Raila Odinga: Dowladdu waa iney sheegto tirada naxashayada laga keenay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raila Odinga: Dowladdu waa iney sheegto tirada naxashayada laga keenay Soomaaliya
16th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Mucaaradka Kenya ayaa sheegay inuu dowladda ka doonayo iney soo bandhigto tirada askarta lagu dilay Soomaaliya tan intii milateriga Kenya gudah u galay Soomaaliya, isagoo la dagaallamaya Alshabaab.
Hoggaamiyaha is-bahaysiga mucaaradka ah ee CORD, Raila Odinga ayaa xukuumadda Kenya ka dalbaday inay soo ban-dhigto tirada ciidamada Kenyaanka ah ee lagu dilay gudaha Soomaliya tan iyo sannadkii 2011 oo ahayd markii ugu horreysay oo ay galaan Soomaaliya.
Sida ay sheegato dowladda Kenya, waxaa Soomaaliya ka jooga ilaa 4,000 oo askar ah, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, hase ahaatee dadka indha-indheeya arrimaha milaterga ayaa ka shaki qaba tirdaas, iyadoo la eegayo baaxadda dhulka ay joogaan ciidamada Kenya iyo dagaallada kasoo wajahaya Alshabaab.
“Waxaan aragnaa in naxashyo la keenayo Kenya maalin walba, Dwladduna weli ma sheegin tirada saxda ah ee ciidamada Kenya kaga dhintay Soomaaliya, marka waa in dowladdu tiradaas sheegtaa” ayuu Raila Odinga.
Wuxuu Odinga oo horay Kenay uga soo noqday ra’iisul wasaare sheegay iney inay tahay sharci in shacabka Kenya dowladdu u sheegto askarta looga dilay Soomaliya, si ay uga fekeraan inay ciidamadooda sii joogaan halkaas iyo in laga soo saaro.
Madaxa isbahaysiga CORD ayaa todobaadkii lasoo dhaafay dalbaday in laga soo saaro ciidamada Kenya gudaha Somalia, taasoo ay sabab uga dhigeen inay xudun u yihiin weerarrada ay Al-shabaab ka geysanayso gudaha dalka Kenya.
Odinga ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo madaxda isbahaysigooda sida; Stave Kalonzo Musyoka, Moses Wetang’ula iyo Xasan Cumar ay diyaar u yihiin in la xiro haddii ay dowladu hayso cadeymo ku saabsan weeraradii ka dhacay Lamu iyo Tana River, taasoo ay ku dhinteen 87 ruux.
Milateriga Kenya ayaa Soomaaliya soo galay bishii October ee sanadkii 2011, iyagoo sheeganaya iney meesha ka saarayaan Alshabaab, hase ahaatee Alshabaab weeraro intii hore ka abdan ka geystay gudaha Kenya.
Alshabaab: Raga la toogtay nama soo galaan, gabartiina ma dilin
Dowladda Soomaaliya oo UN-ka ka rabta inuu ka caawiyo dhanka warbaahinta